XASAASI: Heshiiskii Ay Arsenal Ku Doonaysay Willian Borges Oo Dhinac U Dhacay & Chelsea Oo Xog Buuxda Heshay - Gool24.Net
XASAASI: Heshiiskii Ay Arsenal Ku Doonaysay Willian Borges Oo Dhinac U Dhacay & Chelsea Oo Xog Buuxda Heshay
August 6, 2020 Apdihakem Omer Adam
Heshiiskii ay kooxda Arsenal dhigeeda Chelsea kaga doonaysay saxeexa garabka ree Brazil ee Willian Borges ayaa u muuqda mid waxkasta u dhammaadeen isla markaana uu ciyaaryahanku ka bixi doona qaybta buluuga ah ee magaalada London una wareegi doono dhinaca cas.
Willian ayaa dhawaan wadahadalo cusub oo uu heshiiska ugu cusboonaysiinayo Chelsea la galay madaxda kooxdaas balse ma noqon mid midho dhal sameeyay maadaama oo wali halkii hore la kala taagnaa.
Willian ayaa caddeeyay warkiisa isla markaana heshiis cusub oo saddex sano ah ka dalbaday Chelsea balse kooxda ayaa gabi ahaanba diiday codsigaas iyagoo aan rabin inay wax laba sano ka badan ka saxeexdaan.
Tababare Frank Lampard ayaa isagu doonayay inuu sii dheereeyo toddobada sano ee uu horeba Willian usoo joogay Stamford Bridge balse Arsenal ayaa ka faa’idaysatay ismari waaga labada dhinac kuna dhaw inay heshiis bilaash ah ku helaan.
Sida ay haatan sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, Arsenal ayaa heshiiska shaqsiga ah la meel dhigtay 32 sano jirkan iyagoo toddobaadkii mushahar u siin doona lacag dhan 100 kun oo Pound.
Warkan ayaa ah mid soo baxaya maalin kaddib markii ay Arsenal shaqada ka caydhisay 55 kamida shaqaalaha kala duwan ee kooxdeeda si ay u yarayso maadaama oo uu dhaqaale xumo ku keenay xanuunka saf-marka ah ee Korona.
Willian ayaa kamid noqonaya tiro xiddigo ah oo Chelsea kasoo ciyaaray balse u wareegay dhinaca Gunners kaddib fursad ciyaareed wanaagsan oo ay ka waayaan Blues.
Dariiqan ayay xiddigihii ugu dambeeyay ee maray ahaayeen goolhaye Petr Cech oo kursiga keydka wakhti u galay Thibaut Courtois iyo David Luiz oo uu Frank Lampard u sheegay inuusan qorshihiisa ku jirin xagaagii 2019.